Olona An-tapitrisany Manerantany No Mahatsiaro ny Vonomoka ny Armeniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Avrily 2015 9:18 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, Català, English
Olona an-tapitrisany no nanao diabe tamin'ny 24 Aprily ho fahatsiarovana ny fahazato taonan'ny Fandripahana Armeniana. Ny daty dia manamarika ny nanangonan'ny manampahefana Ottoman ireo manampahaizana sy ireo mpitarika ny fiarahamonina Armeniana 250 tao Constantinople ny andron'ny 24 Aprily, izay nanome lalana ny Fandripahana ny Armeniana ka tombanana ho 1,5 tapitrisa teo ireo olom-pirenena Armeniana tao amin'ny Fanjakana Ottoman novonoina tanelanelan'ny taona 1915 sy 1918.
Tao Yerevan, Armeniana sy vahiny an'hetsiny no nandray anjara tamin'ny diabe goavana niainga tao amin'ny Kianjan'ny Repoblika hatrao Tsitsernakaberd, Fahatsiarovana ny Vonomoka Armeniana. Nandray anjara sy naka sary nandritra ny hetsika ity mpanoratra ato amin'ny Global Voices ity.
Diaben'ny fahazato taona nanaovana vonomoka ny Armeniana tao Yerevan, 24 Avrily. Saripika Joey Ayoub.
Armeniana sy ny mpanohana tonga ao Tsitsernakaberd, 24 Avrily. Saripikan'i Joey Ayoub
Afo tsy maty hita tamin'ny nametrahan'ny lehilahy iray voninkazo tao anatin'i Tsitsernakaberd, 24 Avrily. Saripikan'i Joey Ayoub.
Armeniana sy ireo mpanohana mametraka voninkazo taoanatin'i Tsitsernakaberd, 24 Avrily. Saripikan'i Joey Ayoub.
Tao Los Angeles, fonenan'ny fiarahamonina Armenina lehibe indrindra ivelan'i Armenia, Armeniana sy mpanohana maherin'ny 100.000 no nanao diabe manatona ny masoivoho Tiorka.
Tonga tao amin'ny masoivoho Tiorka ao Wilshire Blvd ny reo mpanao diabe. mitari-dalana i @Sky5Tim. Jereo ny sary
Zoro ijerena ny diaben'ny fahatsiarovana ny Vonomoka Armeniana tao Los Angeles avy eny an-habakabaka, teo amin'ny 50k teo ireo tonga nandray anjara
Tao Libanona, olona 30-40,000 eo ho eo no nanao diabe. Nandany ny andro vitsiny farany tamin'ny fankalazana ny lova Armeniana ao aminy ireo Libaney marobe.
Omaly ny diabe ao Beirut mba hanamarihana ny fahazato taonan'ilay ny Vonomoka Armeniana
Armeniana Libaney sy mpanohana nanao diabe tamin'ny 24 Aprily. Sary avy amin'i Paul Gorra.Lebanese Armenians and supporters marched on April 24. Photo by Paul Gorra.
Tao Istanbul, mamaritra ny tahotr'izy ireo ny Tiorka, Kiorda, Grika sy Asyrianina fa handrava ny diaben'izy ireo ny nasionalista. Nozarain'ny tetikasa Armeniana Am-pielezana tao amin'ny Facebook ity tantara manaraka ity.
Ny diabe tao Istanbul tamin'ny 24 Avrily. Saripikanozarain'ny Armenian Diaspora Project.
Hoy ny vakin'ny tantara:
Andro tsy hay tantaraina ny omaly. Ny tahotro indrindra tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny fahatsiarovana ny Fandripahana Armeniana tao Istanbul dia noho izao fanatonan'ny fifidianana itadiavana ny vaton'ny MPH/nasionalista izao ka ijeren'i Erdogan ny fisianay eo amin'ny Istiklal Cd ho endrika fandrahonana ka mety idiran'ny polisy an-tsehatra, hamela ireo mpanao fihetsiketsehana nasionalista hihoatra ny fetra farany azon'izy ireo itsahina ka hanafika anay avy eo.
Rehefa nipetraka niatrika ny kianja Taxim izahay, dia nahare ny hiakan'ireo nasionalista ao aorianay izahay isaky ny mitsaha-teny ireo mpandahateny. Toa miha-mafy hatrany izany, tahaka ny mihamanakaiky izy ireo. Avy eo – satria somary malefaka ny feon'i Sareri Hovin Mernem- nahare horakora-pifaliana mafy teo akaiky teo izahay, ary avy eo miha-mafy hatrany hatrany ny hiaka, feo reko imbetsaka teo amin'ny fiainako rehefa manangom-baovaom-pihetsiketsehana; nihoatra ny tsipiky ny polisy ny feon'ireo mpanao fihetsiketsehana.
Rehefa nitsangana hiatrika izay manatona izahay dia nahita azy ireo. Tsy nasionalista tezitra manofahofa saina menan'ny Antoko Vatan, fa Tiorka, Kiorda, Grika sy Asyriana an'arivony mitondra marika mivaky hoe “հոս էնք” (Eto isika), mitondra ny sarin'i Hrant Dink, Gomidas, Sevag Balikci , Taniel Varujan sy ny maro hafa, manakoako ny hiakam-piraisankinan'izy ireo teny an-dalambe.
Nisy namana iray nihazakazaka teo amin'ireo vahoaka talanjona, miaraka amin'ny tanana mitsangana sady mihiaka hoe “Eto izy ireo mba hiaraka amintsika! Nameno ny arabe izy ireo!”Koa misaotra anareo. Misaotra anareo Tiorka, Kiorda sy ny Asyrianina nitsangana niaraka taminay. Misaotra ireo vondrona Tiorka mpiaro ny zon'olombelona tamin'ny fikarakarana ny fahatsiarovana tao Hydarpasa. Misaotra ny Armenianina eto Istanbul. Misaotra an'i Osman Kavala. Misaotra an'i Sarah Leah Whitson, Nancy Kricorian, Heghnar Watenpaugh sy ny rehetra ao amin'ny Project 2015.
Tsy misy toeran-kafa tokony hisy ahy tamin'ity herinandro ity.
Tao Diyarbakir, Tiorkia, izay ahitana mponina Kiorda marobe, nanao diabe ny olona tamin'ny 24 Aprily:
Manao diabe ny olona ao Amed ((Diyarbakir) mba hahatsiaro ny Vonomoka natao tamin'ny Armeniana.
Namono ny jiro tamin'ireo toerana manan-tantara i Paris sy i Roma ho fahatsiarovana ny Vonomoka nahazo ny Armeniana:
Tao Paris, maizina ny Tour Eiffel ho fahatsiarovana ny fahazato taonan'ny Fandripahana ny Armeniana
“Tanàna mandrakizay-Roma, maizina ny “Colosseum” ho fahatsiarovana ireo niharam-boina tamin'ny Fandripahana ny Armeniana.
Raha hijery sary maro manerantany, jereo ity fitantarana avy amin'ny RT ity.